တစ်ချိန်က တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာ မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က အချောအလှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆွေဇင်ထိုက် - Celebrity Corner
တစ်ချိန်က တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာ မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က အချောအလှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆွေဇင်ထိုက်
မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က အချောအလှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီး ဆွေဇင်ထိုက် အကြောင်း…
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အရင်ခေတ်ကလည်း နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အခုထိလည်းလှပထက်မြက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး လည်းဖြစ် ဒါရိုက်တာလဲဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက် ခေါ် အန်တီ grace အကြောင်းကို တက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အန်တီ ဆွေဇင်ထိုက် ကို graceလို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ် အန်တီ ဆွေဇင်ထိုက်လို့ပြောလိုက်ရင် ပညာတော်လွန်းပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပညာရပ်တွေကိုလည်း ချွင်းချက်မရှိ သိတတ်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုရ မင်းသမီး လို့ ပရိတ်သတ်များရင်းနှီးကြပါလိမ့်မယ်
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ကို ၁၃ရက် ဇွန်လ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ လယ်သမားမျိုးရိုးလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်မှာ မွေးချင်းမောင်နှမ လေးယောက်ရှိပါတယ်။ဒေါ် ရွေဇင်ထိုက်ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ က ပညာရေးကို ထူးချွန်အောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အ.ထ.က(၂)စမ်းချောင်းတွင် အထက်တန်းပညာသင်ကြားကာ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် မှ B.Com. (I.T.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Burma Council of Account မှ စာရင်းကိုင် ဒီပလိုမာထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်သည် ၁၉၈၉ တွင် Alliance Francaise မှ ပြင်သစ်ဘာသာ ဒီပလိုမာ (Diplome de Langue Francaise) ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် ရှိ University of Southern California က ပို့ချသော မီဒီယာ ခေါင်းဆောင်သင်တန်းကို (Media Leadership Training Program, specialization in Social Content Media Production Course) တက်ရောက် လေ့လာခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
တော်လွန်းတဲ့ အန်တီ grace ပါပဲနော် အနုပညာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဆွေဇင်ထိုက်ဟာ ၇ တန်း ဖြေဆိုပြီးနောက်မှာ အမေဖြစ်သူ၏တိုက်တွန်းမှုကြောင့် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း ရှုမဝ ဦးကျော်၏ ‘ရှုမဝ သရုပ်ဆောင် သင်တန်း’ ကို တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ကတည်းက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဆွေဇင်ထိုက်သည် ရှုမဝဦးကျော် ရိုက်ကူးမည့် စေလိုရာစေ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်သစ် လျှောက်လွှာခေါ်ရာမှစတင်၍ အနုပညာလောကထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ် ဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ထိုဇာတ်ကားတွင် ဇော်ဝမ်း၊ လင်းထင်တို့နှင့်အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်သည် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား မရိုက်ကူးမီ ၁ဝ တန်း စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးမှ ပထမနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူဘဝတွင် ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား ညွန့်ဝင်း၊ မင်းသမီးများအဖြစ် ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ မေဝင်းမောင် တို့နှင့် တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့သော မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ် အတွက် အကယ်ဒမီဆု (အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့) ကို ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်က ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆွေဇင်ထိုက်သည် အောင်မြင်နေချိန်တွင် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော စိန်မြင့် နှင့် ခိုးရာ လိုက်ပြေးခဲ့သည့်အတွက် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ထိုကာလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သတင်းစာများ၏ မျက်နှာဖုံးတွင် “ကိုကို့ကို ကျမက ခိုးတာပါ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်လည်းထွန်းကားခဲ့ပါတယ် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရုံတင် ပြသခဲ့သော အဖေတခု သားတခု ဇာတ်ကားတွင် စိန်မြင့်၊ ဇော်လင်း၊ အောင်ထွန်းလေး၊ ဆွေဇင်ထိုက်တို့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ ဇာတ်ကားတွင် ညွန့်ဝင်း၊ ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ ဆွေဇင်ထိုက်၊ မေဝင်းမောင်၊ နန်းဝေဝေ ၊ မိုးမမမျိုး တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပန်းဆက်သမားနဲ့ ဝဏ္ဏ သိဂီ၊ အဖေတစ်ခု သားတစ်ခု၊ နေကျောက်ခဲ၊ အကာက အချစ် အနှစ်က မေတ္တာ၊ စိမ်းနဲ့ တေဇာ၊ သမီးနဲ့ အမေများ စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပြီး အသံကတ်ဆက်ဇာတ်လမ်းများစွာကိုလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်လောကမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဖြစ် ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှုကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် ပရီုဂျူဆာ လုပ် ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်လို့ အန်တီgraceကဆိုပါတယ်။ရှုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာပဲ ကျောင်းတက်တာကို လည်းမပြတ်တမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ချိန်က ကျားဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်ဟာ အခုမှာတော့ အဖက်ဖက်က နိမ့်ပါးနေတဲ့ အတွက် အားမရဖြစ်မိတယ်လို့ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်ပြောပါတယ်။မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောကကို ပိုပိုပြီးတိုးတက်စေချင်ပြီး တစ်ထောင့်တစ်နေရာကလဲ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်။ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ် အတွင်း ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ဇာတ်လမ်းပေါင်း ၅ဝ ကျော်ကို ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရိုက်ကူး တင်ဆက်ခဲ့သူ ဖြစပါတယ် ၁၉၉၅ နှင့် ၁၉၉၇ နှစ်များတွင် ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပသော အသိဉာဏ်ပညာ ဆိုင်ရာ တီထွင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများ (Intellectual Property Rights Seminar) စီမီနာကို မြန်မာ ရုပ်ရှင်ထုတ်သူများ ကိုယ်စား တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀ဝ ပြည့်နှစ်တွင် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ Natal University တွင် ကျင်းပခဲ့သော (၁၃) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ညီလာခံကို လေ့လာသူ အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ ဆိုဘုန်း တက္ကသိုလ် (Sorbonne University) နှင့် သုတေသန ဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Research) တို့ ပူးတွဲ ကျင်းပသော အရှေ့တောင် အာရှ ဒေသအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ‘Health Information for Migrants in South East Asia’ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ပြီး စာတမ်း တင်သွင်းခဲ့သလို၊ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူများ ကိုယ်စား ကွာလာလမ်ပူ ကမ္ဘာ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် (KL World Film Festival) ကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေမြို့တွင် ကျင်းပသော (၅) ကြိမ်မြောက် အာရှရုပ်ရှင် ပွဲတော် (Fifth Asian Eye Film Festival) ကို တက်ရောက်ပြီး ‘Myanmar movies: Past, Present & Future’ စာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြနိုင်သော ဇာတ်ကား ရှစ်ကားကိုလည်း အင်္ဂလိပ် စာတန်းထိုးကာ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ် အထိ Commerce Graduate Association (Myanmar) ၏ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်၊ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၁ အထိ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်၊ ၁၉၉ဝ မှ ၁၉၉၂ အထိ ရန်ကုန် ယူနီဆက် (UNICEF)၊ IDD project သတင်း ပြန်ကြားရေး အရာရှိ၏ အတိုင်ပင်ခံ၊ ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၃ အထိ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (Myanmar Maternal & Child Welfare Association) ၏ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်၊
၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာ အထိ Population Services International Myanmar (PSI – Myanmar) ၏ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ (အသံလွှင့် ဌာနများ၊ Broadcast Media)၊ ၂၀၀၅ ဖေဖော်ဝါရီ မှ ၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ အထိ မြန်မာ ခရစ်ကက် ဖက်ဒရေးရှင်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၊ ၂၀၀၅ ဇွန် မှ ၂၀၀၇ ဇူလိုင် အထိ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၃) အစရှိသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သလို၊ ၂၀၀၇ မှစ၍ မြန်မာ ဟော်ကီ ဖက်ဒရေးရှင်း၏ အတွင်းရေးမှူး (အမျိုးသမီးရေးရာ) အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး အတွေ့အကြုံ နှင့် အမြင်များကို ဘလောက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မျှဝေနေပါတယ်။
အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဆုရှင် တွေကိုသေချာ စီစစ်ရွေးချယ်တဲ့ နေရာမှာ ပရိတ်သတ်တွေကြားအန်တီ grace ဟာ နာမည်ကြီးပါတယ် ။ဇော်ဝမ်း သုမောင် ကျော်ဟိန်းစတဲ့ မင်းသားတွေဟာ အန်တီ grace ရဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးသုံးယောက်ဖြစ်ပြီး သတိတရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ကျော်ဟိန်းကို အန်တီ grace အမြဲတမ်း လေးစားသဘောကျခဲ့ပြီး ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ ရဟန်းဘဝဖြင့် နောက်ဆုံးအချိန်ကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းသွားပုံကို အားကျခဲ့တယ်လို့ အန်တီgraceကဆိုပါတယ် အနုပညာအရည်အသွေးဟာ ပရုတ်လုံးလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပါးလျလာပြီး အရည်အသွေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုကာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာရှင်ကြယ်ပွင့် အသစ်ကလေးတွေဟာ အနုပညာသက်လုံကောင်းကောင်းရှိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်
ပရိတ်သတ်ကို လေးစားခဲ့ပြီး အနုပညာကြယ်ပွင့် အသစ်ကလေးများကို အမြဲတမ်းလက်ခံကြိုဆိုရမယ်လို့ အန်တီgraceကဆိုပါတယ်။မြန်မာ့ ဇာတ်ကားတွေကို ကမ်ညာက သိဖို့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ မြန်မာ့ဇာတ်ကားအဖြစ် နိုင်ငံအလယ်မှာ ရပ်တည်နိုင်အောင် အန်တီ graceက အမြဲမြင်ချင်ခဲ့ပြီး ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် အန်တီgraceက တက်သစ်စ လူငယ်များအတွက် ရုပ်ရှင်ပညာတွေကို ဆက်လက် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး ရုပ်ရှင်လောက အတွက် အမြဲတမ်း လိုအပ်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။
မိနျးမလှကြှနျးလို့ချေါတဲ့ စီးပှားရေးတက်ကသိုလျက အခြောအလှတဈယောကျဖွဈခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီး ဆှဇေငျထိုကျ အကွောငျး…
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အရငျခတျေကလညျး နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ အခုထိလညျးလှပထကျမွကျနဆေဲဖွဈတဲ့ ရုပျရှငျမငျးသမီးကွီး လညျးဖွဈ ဒါရိုကျတာလဲဖွဈတဲ့ အကယျဒမီ ဆှဇေငျထိုကျ ချေါ အနျတီ grace အကွောငျးကို တကျဆကျပေးမှာပဲဖွဈပါတယျ အနျတီ ဆှဇေငျထိုကျ ကို graceလို့လဲ ချေါကွပါတယျ အနျတီ ဆှဇေငျထိုကျလို့ပွောလိုကျရငျ ပညာတျောလှနျးပွီး အနုပညာနဲ့ပတျသတျတဲ့ ပညာရပျတှကေိုလညျး ခြှငျးခကျြမရှိ သိတတျလှနျးတဲ့ မွနျမာ့ရုပျရှငျထူးခြှနျဆုရ မငျးသမီး လို့ ပရိတျသတျမြားရငျးနှီးကွပါလိမျ့မယျ
ဒျေါဆှဇေငျထိုကျ ကို ၁၃ရကျ ဇှနျလ ၁၉၅၃ ခုနှဈတှငျ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ လယျသမားမြိုးရိုးလို့ဆိုပါတယျ။ဒျေါဆှဇေငျထိုကျမှာ မှေးခငျြးမောငျနှမ လေးယောကျရှိပါတယျ။ဒျေါ ရှဇေငျထိုကျရဲ့ မိခငျဖွဈသူ က ပညာရေးကို ထူးခြှနျအောငျ ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အ.ထ.က(၂)စမျးခြောငျးတှငျ အထကျတနျးပညာသငျကွားကာ တက်ကသိုလျဝငျ တနျး အောငျမွငျခဲ့ပွီး ၁၉၇၇ ခုနှဈတှငျ ရနျကုနျ စီးပှားရေး တက်ကသိုလျ မှ B.Com. (I.T.) ဘှဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
၁၉၈၄ ခုနှဈတှငျ Burma Council of Account မှ စာရငျးကိုငျ ဒီပလိုမာထပျမံရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒျေါဆှဇေငျထိုကျသညျ ၁၉၈၉ တှငျ Alliance Francaise မှ ပွငျသဈဘာသာ ဒီပလိုမာ (Diplome de Langue Francaise) ရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၀၂ ခုနှဈတှငျ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု၊ လော့ဈအိနျဂယျြလိဈ ရှိ University of Southern California က ပို့ခသြော မီဒီယာ ခေါငျးဆောငျသငျတနျးကို (Media Leadership Training Program, specialization in Social Content Media Production Course) တကျရောကျ လလေ့ာခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ ။
တျောလှနျးတဲ့ အနျတီ grace ပါပဲနျော အနုပညာကို စိတျဝငျစားတဲ့ ဆှဇေငျထိုကျဟာ ၇ တနျး ဖွဆေိုပွီးနောကျမှာ အမဖွေဈသူ၏တိုကျတှနျးမှုကွောငျ့ နှရောသီ ကြောငျးပိတျရကျအတှငျး ရှုမဝ ဦးကြျော၏ ‘ရှုမဝ သရုပျဆောငျ သငျတနျး’ ကို တကျရောကျ သငျကွားခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၇၁ ခုနှဈ ကတညျးက ရုပျရှငျ ဇာတျကားမြား ရိုကျကူးခဲ့ပွီး ၁၉၇၂ ခုနှဈမှာ ရုံတငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၇၁ ခုနှဈတှငျ ဆှဇေငျထိုကျသညျ ရှုမဝဦးကြျော ရိုကျကူးမညျ့ စလေိုရာစေ ရုပျရှငျ ဇာတျကားအတှကျ သရုပျဆောငျသဈ လြှောကျလှာချေါရာမှစတငျ၍ အနုပညာလောကထဲသို့ ဝငျရောကျလာခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ဒျေါ ဆှဇေငျထိုကျရဲ့ ပထမဆုံးရုပျရှငျဇာတျကားဖွဈပွီး ထိုဇာတျကားတှငျ ဇျောဝမျး၊ လငျးထငျတို့နှငျ့အတူ တှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ဒျေါဆှဇေငျထိုကျသညျ ရုပျရှငျ ဇာတျကား မရိုကျကူးမီ ၁ဝ တနျး စာမေးပှဲ ဖွဆေိုပွီးမှ ပထမနှဈ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူဘဝတှငျ ရိုကျကူးခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။မငျးသား ညှနျ့ဝငျး၊ မငျးသမီးမြားအဖွဈ ဝါဝါဝငျးရှေ၊ မဝေငျးမောငျ တို့နှငျ့ တှဲဖကျ သရုပျဆောငျ ရိုကျကူးခဲ့သော မိနျးကလေးရှငျရဲ့ဆန်ဒ ရုပျရှငျဇာတျကားဖွငျ့ ၁၉၇၇ ခုနှဈ အတှကျ အကယျဒမီဆု (အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီး ဇာတျပို့) ကို ဒျေါဆှဇေငျထိုကျက ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဆှဇေငျထိုကျသညျ အောငျမွငျနခြေိနျတှငျ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ တဈဦးဖွဈသော စိနျမွငျ့ နှငျ့ ခိုးရာ လိုကျပွေးခဲ့သညျ့အတှကျ ဟိုးလေးတကြျော ဖွဈခဲ့ပါသေးတယျ။ ထိုကာလတှငျ ထုတျဝခေဲ့သော သတငျးစာမြား၏ မကျြနှာဖုံးတှငျ “ကိုကို့ကို ကမြက ခိုးတာပါ” ဟူသော ခေါငျးစဉျမြားဖွငျ့ ကြျောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျမှာ သမီးလေးတဈယောကျလညျးထှနျးကားခဲ့ပါတယျ ၁၉၇၇ ခုနှဈတှငျ ရုံတငျ ပွသခဲ့သော အဖတေခု သားတခု ဇာတျကားတှငျ စိနျမွငျ့၊ ဇျောလငျး၊ အောငျထှနျးလေး၊ ဆှဇေငျထိုကျတို့ သရုပျဆောငျခဲ့ကွပွီး မိနျးကလေးရှငျရဲ့ ဆန်ဒ ဇာတျကားတှငျ ညှနျ့ဝငျး၊ ဝါဝါဝငျးရှေ၊ ဆှဇေငျထိုကျ၊ မဝေငျးမောငျ၊ နနျးဝဝေေ ၊ မိုးမမမြိုး တို့ ပါဝငျ သရုပျဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။
ပနျးဆကျသမားနဲ့ ဝဏ်ဏ သိဂီ၊ အဖတေဈခု သားတဈခု၊ နကြေောကျခဲ၊ အကာက အခဈြ အနှဈက မတ်ေတာ၊ စိမျးနဲ့ တဇော၊ သမီးနဲ့ အမမြေား စတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားမြားစှာကို ရိုကျကူးတငျဆကျခဲ့ပွီး အသံကတျဆကျဇာတျလမျးမြားစှာကိုလညျး သရုပျဆောငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ၁၉၉၁ ခုနှဈတှငျ ရုပျရှငျလောကမှ အနားယူခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၉၃ ခုနှဈတှငျ ရုပျရှငျမငျးသမီးအဖွဈ ဇာတျကား ရိုကျကူးမှုကို ရပျတနျ့ခဲ့ပွီး ကိုယျတိုငျ ပရီုဂြူဆာ လုပျ ကိုယျတိုငျ ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျလို့ အနျတီgraceကဆိုပါတယျ။ရှုပျရှငျရိုကျကူးနစေဥျမှာပဲ ကြောငျးတကျတာကို လညျးမပွတျတမျးကွိုးစားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
တဈခြိနျက ကြားဖွဈခဲ့တဲ့ မွနျမာ့ ရုပျရှငျဟာ အခုမှာတော့ အဖကျဖကျက နိမျ့ပါးနတေဲ့ အတှကျ အားမရဖွဈမိတယျလို့ ဒျေါဆှဇေငျထိုကျပွောပါတယျ။မွနျမာ့ရုပျရှငျ လောကကို ပိုပိုပွီးတိုးတကျစခေငျြပွီး တဈထောငျ့တဈနရောကလဲ ပါဝငျလုပျဆောငျနပေါသေးတယျ။ဒျေါဆှဇေငျထိုကျသညျ ၁၉၇၁ ခုနှဈမှ ၁၉၉၁ ခုနှဈ အတှငျး ရုပျရှငျ ဇာတျကားပေါငျး ၂၀ဝ ကြျောတှငျ ပါဝငျ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး၊ ဇာတျလမျးပေါငျး ၅ဝ ကြျောကို ထုတျလုပျသူ သို့မဟုတျ ဒါရိုကျတာ အဖွဈ ရိုကျကူး တငျဆကျခဲ့သူ ဖွစပါတယျ ၁၉၉၅ နှငျ့ ၁၉၉၇ နှဈမြားတှငျ ဟောငျကောငျ တက်ကသိုလျတှငျ ကငျြးပသော အသိဉာဏျပညာ ဆိုငျရာ တီထှငျမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျသော မူပိုငျခှငျ့ အခှငျ့အရေးမြား (Intellectual Property Rights Seminar) စီမီနာကို မွနျမာ ရုပျရှငျထုတျသူမြား ကိုယျစား တကျရောကျရနျ ရှေးခယျြခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
၂၀၀ဝ ပွညျ့နှဈတှငျ တောငျအာဖရိကနိုငျငံ Natal University တှငျ ကငျြးပခဲ့သော (၁၃) ကွိမျမွောကျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အအေိုငျဒီအကျဈ ညီလာခံကို လလေ့ာသူ အဖွဈ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ ၂၀၀၃ ခုနှဈတှငျ ပွငျသဈနိုငျငံ ပါရီမွို့ ဆိုဘုနျး တက်ကသိုလျ (Sorbonne University) နှငျ့ သုတသေန ဝနျကွီးဌာန (Ministry of Research) တို့ ပူးတှဲ ကငျြးပသော အရှတေ့ောငျ အာရှ ဒသေအတှငျး ရှပွေ့ောငျး အလုပျသမားမြား အတှကျ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား ‘Health Information for Migrants in South East Asia’ ဆှေးနှေးပှဲကို တကျရောကျပွီး စာတမျး တငျသှငျးခဲ့သလို၊ ရုပျရှငျ ထုတျလုပျသူမြား ကိုယျစား ကှာလာလမျပူ ကမ်ဘာ့ ရုပျရှငျပှဲတျော (KL World Film Festival) ကို တကျရောကျခဲ့ပါတယျ
၂၀၀၆ ခုနှဈတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ဘုံဘမွေို့တှငျ ကငျြးပသော (၅) ကွိမျမွောကျ အာရှရုပျရှငျ ပှဲတျော (Fifth Asian Eye Film Festival) ကို တကျရောကျပွီး ‘Myanmar movies: Past, Present & Future’ စာတမျးကို ဖတျကွားခဲ့သလို၊ မွနျမာနိုငျငံ အကွောငျး မီးမောငျး ထိုးပွနိုငျသော ဇာတျကား ရှဈကားကိုလညျး အင်ျဂလိပျ စာတနျးထိုးကာ ပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။၁၉၇၈ မှ ၁၉၈၁ ခုနှဈ အထိ Commerce Graduate Association (Myanmar) ၏ အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ဝငျ၊ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၁ အထိ ရုပျရှငျ အစညျးအရုံး အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ဝငျ၊ ၁၉၉ဝ မှ ၁၉၉၂ အထိ ရနျကုနျ ယူနီဆကျ (UNICEF)၊ IDD project သတငျး ပွနျကွားရေး အရာရှိ၏ အတိုငျပငျခံ၊ ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၃ အထိ မိခငျနှငျ့ ကလေး စောငျ့ရှောကျရေး အသငျး (Myanmar Maternal & Child Welfare Association) ၏ အလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ဝငျ၊
၁၉၉၉ မှ ၂၀၀၆ အောကျတိုဘာ အထိ Population Services International Myanmar (PSI – Myanmar) ၏ ဆကျသှယျရေး အရာရှိ (အသံလှငျ့ ဌာနမြား၊ Broadcast Media)၊ ၂၀၀၅ ဖဖေျောဝါရီ မှ ၂၀၀၇ ဖဖေျောဝါရီ အထိ မွနျမာ ခရဈကကျ ဖကျဒရေးရှငျး အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး၊ ၂၀၀၅ ဇှနျ မှ ၂၀၀၇ ဇူလိုငျ အထိ ရုပျရှငျ အစညျးအရုံး တှဲဖကျ အတှငျးရေးမှူး (၃) အစရှိသော တာဝနျမြားကို ထမျးဆောငျခဲ့သလို၊ ၂၀၀၇ မှစ၍ မွနျမာ ဟျောကီ ဖကျဒရေးရှငျး၏ အတှငျးရေးမှူး (အမြိုးသမီးရေးရာ) အဖွဈ တာဝနျ ထမျးဆောငျလကျြရှိပွီး အတှအေ့ကွုံ နှငျ့ အမွငျမြားကို ဘလောကျရေးသားခွငျးဖွငျ့ မြှဝနေပေါတယျ။
အကယျဒမီဘုတျအဖှဲ့ဝငျ တဈယောကျဖွဈပွီး အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ဆုရှငျ တှကေိုသခြော စီစဈရှေးခယျြတဲ့ နရောမှာ ပရိတျသတျတှကွေားအနျတီ grace ဟာ နာမညျကွီးပါတယျ ။ဇျောဝမျး သုမောငျ ကြျောဟိနျးစတဲ့ မငျးသားတှဟော အနျတီ grace ရဲ့ သူငယျခငျြးကွီးသုံးယောကျဖွဈပွီး သတိတရရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ ကြျောဟိနျးကို အနျတီ grace အမွဲတမျး လေးစားသဘောကခြဲ့ပွီး ဦးကြျောဟိနျးရဲ့ ရဟနျးဘဝဖွငျ့ နောကျဆုံးအခြိနျကို အေးခမျြးစှာဖွတျသနျးသှားပုံကို အားကခြဲ့တယျလို့ အနျတီgraceကဆိုပါတယျ အနုပညာအရညျအသှေးဟာ ပရုတျလုံးလိုတဈဖွညျးဖွညျးပါးလလြာပွီး အရညျအသှေးကဆြငျးသှားတယျလို့ဆိုကာ နောကျပိုငျးမှာတော့ အနုပညာရှငျကွယျပှငျ့ အသဈကလေးတှဟော အနုပညာသကျလုံကောငျးကောငျးရှိရမယျလို့ ဆိုပါတယျ
ပရိတျသတျကို လေးစားခဲ့ပွီး အနုပညာကွယျပှငျ့ အသဈကလေးမြားကို အမွဲတမျးလကျခံကွိုဆိုရမယျလို့ အနျတီgraceကဆိုပါတယျ။မွနျမာ့ ဇာတျကားတှကေို ကမ်ညာက သိဖို့ အသိအမှတျပွုဖို့ မွနျမာ့ဇာတျကားအဖွဈ နိုငျငံအလယျမှာ ရပျတညျနိုငျအောငျ အနျတီ graceက အမွဲမွငျခငျြခဲ့ပွီး ကွိုးစားနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ အနျတီgraceက တကျသဈစ လူငယျမြားအတှကျ ရုပျရှငျပညာတှကေို ဆကျလကျ သငျကွားပေးလကျြရှိပွီး ရုပျရှငျလောက အတှကျ အမွဲတမျး လိုအပျတဲ့ ကှကျလပျတှကေို ဖွညျ့ပေးနပေါတယျ။
အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကြုံရချိန်မှာတောင် အဓိကဖြစ်နိုင်မဲ့ အရာကို ရွေးချယ်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ပရိသတ်တွေချီးကျူးနေခဲ့ရတဲ့ မေပန်းချီ…
နိုင်ငံခြား မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်အလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ အလှတရားတွေ အပြည့်နဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ…